Enye yezinhlobo eziyigugu kakhulu abathandi bomkhiqizo beezinyosi uju lwehlathi. Izitshalo ezihlukahlukene kakhulu zobuningi zisenza sikwazi ukuthola umkhiqizo onenambitheka eyingqayizivele kanye nezimfanelo zokwelapha.
Iyini uju lwehlathi?
Ngisho nasezikhathini zasendulo umuntu wasebenzisa uju eqoqwe izinyosi zasendle ehlathini. Kwabe sekuqala ukuhlakulela izinyosi, lapho lezi zinambuzane eziwusizo zitshalwe emigodini yezihlahla. Uju, olutholakala ngale ndlela, lwalubizwa nge-bortevy. Kuhlukile kulokho ukungenelela komuntu emsebenzini wezinyosi kuphelelwe ngokuphelele kulokhu. Namhlanje kunezimbalwa ezingaphansi kwezindiza ezweni. Ngokuvamile, imihlathi imane iboniswe ihlobo lonke ehlathini, lihlanza ngemuva kokuphela kwenkathi. Uju oluqoqwe emifino exutshwe luhluke ngokujwayelekile kulezi zici eziningi. Une-flavour eyingqayizivele nemibala ehlukahlukene - kusukela egolide elikhanyayo kuze kube mnyama omnyama. I-raspberry, i-hawthorn, i-Cyprian, i-strawberry, i-clover, i-linden, i-ash ash, i-cherry nezinye izitshalo eziwusizo zenza i-honey idijithi ehlukile yokuphulukisa, engakaze ifundwe kuze kube sekugcineni. Akumangalisi ukuthi ibizwa ngokuthi i-elite.
Ngenxa yobuningi bezitshalo zobuningi obambe iqhaza ekusungulweni kwalo mkhiqizo, kufaka hlangana ne-vitamin yeqembu eliphelele: A, E, P, B, B2, C, K. Ngaphezu kwalokho, sinesizinda esiqinile sokuqapha izinsimbi. Esikhathini sohlobo lwezinyosi kukhona i-phosphorus, i-carotene, ehlinzeka ikhono lomzimba lokubhekana nezifo ezihlukahlukene. Umzamo omkhulu wokulwa nabo unikeza i-fructose efana ne-sucrose kalula. Amakhemikhali angaphezu kwekhulu asebenzayo anezinyosi zehlathi.
I-spectrum yezenzo zokwelapha zalesi mkhiqizo ikhulu kakhulu futhi ngenxa yokubunjwa kwayo okucebile. Uju oluvela emahlathini e-motley utshani lunemithi yokwelapha. Iyakwazi ukuthola imithi yokulwa ne-antibacterial, anti-inflammatory ngisho ne-analgesic. Ukusetshenziswa kwansuku zonke komkhiqizo onjalo kusiza ukwandisa i-hemoglobin, ukuhlanza umzimba wezinyosi, ukuqinisa ingculazi, ukuphuthumisa ukuphulukiswa kwesilonda, ukuthuthukisa ukusebenza kwesibindi kanye ne-gallbladder, ngaphezu kwalokho, ukudla okunomsoco kunikezwa isisu senhliziyo kanye nemiphumela emihle kuzo zonke izinhlelo.
Ngokubunjwa kwalo, uju lwehlathi lifana kakhulu ne-plasma yegazi, ngakho-ke lithatha cishe ngokuphelele, futhi wonke amaminerali namavithamini angena emzimbeni. Ukunciphisa izinqubo zemetaboli nokubuyisela isizinda semvelo, lo mkhiqizo usiza ukunciphisa isisindo esiningi. Isibonakaliso esibalulekile sekhwalithi yaso ukuhlanzeka kwemvelo - uju, oqoqwe kude nempucuko, awunamalungu ahlanzekile kanye nokungcola okuhlukahlukene. Lokhu kuyigugu kunayo yonke izimfanelo zayo kuzo zonke izinhlobo ezikhona.
Sebenzisa emithi yokwelapha
Noma kunjalo odokotela bama-zemskie abamiselwe iziguli ezivela ezifweni ezihlukahlukene kunazo zonke izinyoni zehlathi. Izakhiwo eziwusizo zalo mkhiqizo zinikeza amandla amandla okuphulukisa okungavamile:
Usiza nge-rheumatism, izifo ezihlangene, i-osteochondrosis.
Kuyindlela yokuvimbela futhi ekhulisayo ngokumelene ne-atherosclerosis.
Ukuba khona uju we-hormone estradiol kukuvumela ukuba ugweme ukuhlukumeza ku-sphere yezocansi (kokubili owesilisa nowesifazane).
Umsebenzi ophezulu wokulwa nokuvuvukala wenza lo mkhiqizo kubaluleke kakhulu ekwelashweni kwemibanda.
Unomphumela onobungozi kuma-bacterium we-pathogenic. Ngesikhathi esifanayo, lezi zinsuku azikwazi ukujwayela uju lwehlathi, ngenxa yokuthi umkhiqizo ungasetshenziswa njalo.
Ukulinganisela ukwakheka kwegazi, kugcizelela izindonga zemithambo yegazi. Ngokusebenzisa njalo lezi zinhlobonhlobo, inkumbulo, ukunakwa kuyathuthukiswa, amandla okusebenza akhuthukisiwe.
Uhlobo lwezinyosi, okuyizinto eziwusizo kanye nokuphikisana kwazo okwaziwa okhokho bethu, futhi kuyisimo esivuselelayo sezinto eziphilayo. Unamandla okunciphisa inqubo yokuguga komzimba womuntu, ukwandisa intsha.
Umsebenzi we-antitumor womkhiqizo wenza kube lula ukuyisebenzisa ekwelapheni nasekuvimbelweni kwezifo ezingokwemvelo.
Umuthi omuhle wezingane
Uju lwehlathi luyisiluleko esilungile ngesikhathi sokuqubuka komkhuhlane nezinye izifo ezithathelwanayo kunezinye. Kubaluleke kakhulu izingane - emva kwakho konke, isidakamizwa se-tastier nesiphunga asikho. Ewusizo kakhulu emakhazeni ingxube ye-vithamini, elungiselelwe kanje: ithisipuni eyodwa uju, ijusi lemon, ama-walnuts oqoshiwe nezithelo ezimile oqoshiwe kahle ukuxuba futhi unike isikhathi esingaphezu kwesigamu sehora ngaphambi kokudla. Ikhambi eliphumelelayo lokukhwehlela lingumshidi omnyama. Ijusi layo, elixutshwe nobusi lwehlathi, liqinisa umphumela wamuva. Lokhu kuholela ekuqedeni okusheshayo kokugubha.
Kusukela emakhazeni amaconsi, alungiswa kusuka ku-anyanisi juice, okungeziwe kuwo amahloni ehlathi. Izakhiwo eziwusizo kanye nokuphikisana kwemikhiqizo kuyaziwa kuwo wonke umuntu kusukela ebuntwaneni. Ukwelashwa komkhuhlane ovamile ngosizo lwabo kuyindlela kagogo omdala. Ukuze ulungiselele isipuni sejuju, thatha izipuni ezintathu zejisi anyanisi ehlanjululwe emanzini ngesilinganiso se-1: 2.
Izinqubo zokucwenga ngezinyosi zehlathi zihlukaniswa njengeziqhamuka futhi zibiza kakhulu. Kodwa ukuyisebenzisa ekhaya akusebenzi kahle, ngakho ungazitholi injabulo enjalo. Ngokuvamile ngenhloso yokwenza izimonyo esetshenziselwa ukuba usebenzise ubuso bomuncu wezinyosi. Izakhiwo eziwusizo, izithombe zomkhiqizo kanye nezinye izindlela zokupheka nazo zingatholakala kulesi sihloko. Kodwa uju nayo iyadingeka ekunakekeleni isikhumba. I-mask eyenziwe kuyo isetshenziselwa ubuso obuhlanzekile futhi isobunxele imizuzu engamashumi amabili. Isikhumba siba velvety, soft, futhi umbala wayo ngcono.
Ukucindezela uju kunomthelela wokwelapha ubuhlungu obuhlangene nobunzima.
Naphezu kobubanzi obuningi bezenzo eziwusizo ozinyosi ehlathini, izinto zalo zokwelapha kanye nokuphikisana kwazo kufanele kucatshangelwe uma usebenzisa. Ngakho-ke, abantu abanesifo sikashukela, ukugqithisa ngokweqile nokungahambisani nokunye kwemikhiqizo yezinyosi, akunconywa ukuthatha.
Iqabunga lama-bay lamalungu: iresiphi. Ukwelashwa ngamalungu okugcoba
I-emulsion yemvelo "i-Riciniol Base": incwadi yokufundisa, ukubuyekezwa
Kuyini alum hromokalievye? Lapho ukuthenga nokuthi yini esetshenziswa
Analog "Sorbifer" ezishibhile futhi ngempumelelo. Analog "Sorbifer" kwabesifazane abakhulelwe
Okusungulile Modern. Popular ezisunguliwe ezithakazelisayo emhlabeni. Lefty yesimanje
Indlela ukupheka okumnandi uwoyela ikhaya inhlanzi
I pistachios ziwusizo umuntu?
Umsebenzi yangemva "Elakithi Little": uhlelo lokuthuthukisa kanye